Google na-ewepụta vidiyo ndị akwadoro na nsonaazụ ọchụchọ | Martech Zone
Otu n'ime anyị ahịa search engine ndị mmekọ tụbara m akwụkwọ n'ehihie a na nseta ihuenyo na-akpali akpali. Rịba ama njikọ nkwado n'okpuru igodo eserese? Lelee vidiyo banyere azụmahịa anyị.
M na-agbanye ndị ahịa m niile na ndị ahịa obodo ka ha nweta ụfọdụ Peeji nke Google elu (nke gara aga Google Local Business) NA m na-akwali ndị ahịa ịmalite iji ya video dị ka akụkụ nke usoro ịre ahịa n'ịntanetị (anyị na!)… Ma nke a lụrụ ha abụọ.
Ikwesiri itinye ya 3 uche na ndị ọbịa nwere ndị dị n'ịntanetị ma na-enyocha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Rylụ vidio iji chọọ nsonaazụ peeji nke engine na maapụ bụ ohere dị ịtụnanya iru ndị na-ege ntị nke na-agaghị anabata naanị ederede ederede. Vidiyo bụ ihe na - ajụ ihe ga - eme ngwa ngwa ngwa ngwa karịa ahịa ọdịnala ma ọ bụ ọbụlagodi ederede na - agbanwe agbanwe.
Tags: rịzọlt googleVidio Ahịaagwonkwado vidiyo